[ N4 Grammar ] 〜んです – another story
[ N4 Grammar ] 〜んです
「〜んです」 ဂျပန်လို ဖော်ပြချက်တစ်ခု ပြုလုပ်ရန် ထူးခြားတဲ့အခြေအနေနှစ်မျိုးရှိတယ်။ နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ သူတို့လေ့လာသုံးသပ်ထားတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ရိုးရှင်းစွာ ပြန်လည်အစီရင်ခံ တင်ပြဖို့ရန်ဖြစ်တယ်။ ဒါက ကျွန်တော်တို့ သင်ယူခြဲ့ပီးတဲ့ စကားပြောခြင်းရဲ့ နည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဒီသင်ခန်းစာမှာ ကျွန်တော်တို့ နည်းလမ်းအသစ်တစ်ခုကို သင်ရမယ်. အရာဝတ္တုတွေကို ရှင်းပြတဲ့ အရာတွေပေါ့.. အစီအရင်ခံစားတစ်ခုက အချက်အလက်တွေတစ်ခုရဲ့ သီးသန့်ဖော်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ သင်က အချိန်းအချက်တစ်ခုအတွက် နောက်ကျနေတဲ့အချိန် ဂျပန်လို ဘာဖြစ်ပျက်ခဲ့သလဲဆိုတာ バスが来ませんでした ဝါကျလိုမျိုး သင်က ပြန်လည်အစီအရင်ခံပြီး တင်ပြနိုင်တယ်။ ဒီဝါကျမှာ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် တကယ်တောင်းပန်တဲ့ အသံအနေအထားမျိုးမရှိဘူး။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ တစ်စုံတစ်ခုအတွက် ရှင်းပြဖို့ရန် မတောင်းဆိုထားလို့ပါပဲ။ သင်က သင့်ရဲ့နောက်ကျမှုအတွက် ခွင့်ပြုချက်တစ်ခုလို ဘတ်စ်ကားက အချိန်မှီ မမောင်းဘူးဆိုတဲ့ အရာကို တင်ပြချင်ရင်၊ သင်က ရှင်းပြခြင်းနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ စကားပြောခြင်းခံစားပုံ သို့ ရှင်းပြခြင်းပါတဲ့ အခြေအနေနဲ့ ဒီလိုပြောနိုင်တယ်။
バスが来なかったんです。 (၄င်းက ဖြစ်ပျက်သလိုပဲ) ကား က မလာခဲ့ဘူး။
ရှင်းပြချက်တစ်ခုမှာ ပေါင်းစပ်ပါဝင်သောအရာနှစ်ခုရှိသည်။ တစ်ခုကတော့ အတည့်အလင်းမကွယ်မဝှက်ပဲ ဝါကျတစ်ခုမှာ ဖော်ပြချက်ဖြစ်သည် ( ဘတ်စ်ကားက မလားဘူး)။ နောက်တစ်ခုကတော့ ၄င်းအားဖြင့် အဓိပ္ပါယ်သက်ဝင်တာ သို့ ရှင်းပြခြင်းခံရတာဖြစ်တယ်။ ( သင်က အချိန်းအချက်တစ်ခုအတွက် နောက်ကျနေခြင်းဖြစ်တယ်). ဒီဝါကျရဲ့ နောက်ဆုံးဖော်ပြချက် んです က ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ ဖော်ပြပေးတယ်.. ဝါကက ဘာပြောသလည်းဆိုတာနဲ့ ဝါက ဘာအတွက်ဖြစ်ပျက်သလဲဆိုတဲ့ နှစ်ခုအခြားကို ဆက်သွယ်ပေးတယ်..နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ..
あしたテストがあります。 ကျွန်တော်မှာ မနက်ဖြန် စာမေးပွဲတစ်ခုရှိတယ် ( ရိုးရှင်းသော ဝေဖန်သုံးသပ်ခြင်းတစ်ခု)
あしたテストがあるんです。 ကျွန်တော့်မှာ မနက်ဖြန် စာမေးပွဲတစ်ခုရှိတယ် ( ဒါကြောင့် ဒီညကျွန်တော်အပြင်မသွားနိုင်ဘူး)
トイレに行きたいです。 ကျွန်တော် ရေချိုးခန်းသွားချင်တယ် ( တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ ဆန္ဒကိုဖော်ထုတ်ခြင်း)
トイレに行きたいんです。 ကျွန်တော်ရေချိုးခန်ကို သွားချင်တယ် ( ဒါကြောင့်ပြောပါ ရေချိုးခန်း ဘယ်နေရာမှာရှိသလဲဆိုတာ) んです က အခိုင်အမာပြောဆိုဖော်ပြချက် သို့ ပြုလုပ်သူနဲ့ ပြုလုပ်သူကိုဖြည့်စွက်ပေးတဲ့ စာကြောင်းတစ်ကြောင့်ရဲ့ အတိုပုံစံပြီးမှာ လိုက်တယ်။ ဖော်ပြချက်စာကြောင်းက အငြင်း သို့ အဟုတ်ဝါကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ပစ္စုပ္ပန်ကာလ သို့ အတိတ်ကာလလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ んです က တော့ သူ့ဟာသူ မပြောင်းလဲဘူး တစ်သမတ်တည်းဖြစ်နေတယ်။ အငြင်းပုံစံအနေနဲ့လည်း မဖော်ပြဘူး သို့ အတိတ်ပုံစံအနေနဲ့လည်းမဖော်ပြဘူး။ အရေးအသားမှာတော့၊ んです အစား のです ကိုပိုပြီးရှာဖွေသုံးစွဲကြတယ်။
成績がよくないんです。 ( ဒီမေးခွန်းကို ပြန်ပြီး တုန့်ပြန်ရရင်..သင်က ဘာကြောင့် အရမ်း ဝမ်းနည်းတဲ့ပုံပေါက်နေတာလည်း ) ( ဒီကိစ္စနဲ့ပါတ်သက်ပြီး) ကျွန်တော့်ရဲ့ အမှတ်က မကောင်းဘူး.
試験が終わったんです。 ( သင့်ကိုပြုံးပြနေသော သူကိုရှင်းပြခြင်း) စာမေးပွဲကပြီးသွားပြီ၊ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ပြုံးနေတာ)
な-advective 静かです　静かなんです noun　学生です　学生なんです သင်က んです ကို ရှင်းပြချက်တွေကို ဖိတ်ခေါ်တဲ့ မေးခွန်းတွေမှာ အသုံးပြုနိင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး သင်နဲ့ စကားပြောနေသောသူကို နောက်ထပ်ရှင်းပြချက်တွေရှင်းပြတဲ့အခါမှာပေါ့..
どうして ကဲ့သို့ သော ( ဘာကြောင့်လည်း) နောက်ပြီး どうした ကဲ့သို့ သော ( ဘာဖြစ်ပျက်ခဲ့သလဲ) စတဲ့ စကားလုံးတွေကို မေးခွန်းစကားလုံးတွေနဲ့အတူတကွမကြာခဏ အသုံးပြုလေ့၇ှိပါတယ်။
Q:どうして彼と別れたんですか？ သင်က ဘာကြောင့် သင့် ချစ်သူကောင်လေးနဲ့ ကွဲသွားခဲ့တာလည်း ( သင်ငါ့ကိုပြောရမည်) A:彼、ぜんぜんお風呂に入らないんです အိုး သူလား၊ သူဘယ်တော့မှာ ရေမချိုးဘူး ( ဒါက လုံလောက်သော ကောင်းသောအကြောင်းပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည် ၊ ဟုတ်လား)
Q:どうしたんですか？ ဘာဖြစ်ပျက်ခဲ့သလဲ ( သင်ကြည့်ရတာ ကြေကွဲနေသလိုပဲ) A:猫が死んだんです ကျွန်တော့်ကြောင်လေးဆုံးသွားခဲ့သည်။ ( ငါဒီနေ့ ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်နေသလဲဆိုတာ ရှင်းပြသင့်သည်)
ဘာပြောခဲ့သည်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာ ထပ်ပြီး အပိုဝေဖန်ချက် သို့ ထင်မြင်ချက်ပေးဖို့ရန်ပံ့ပိုးချင်သည့်အခါ သင်က んです ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ A: とてもいい教科書ですね。 သင်သုံးနေတဲ့ ပုံနိပ်စာအုပ်က တကယ့်ကိုကောင်းတဲ့ ပုံနိပ်စာအုပ်ပဲ.. B:ええ、私の大学の先生が書いたんです。 သင်လောင်းမလား၊ ဒါကို ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်တုန်းက ပရော်ဖက်ဆာတွေက ရေးခဲ့တာ ( သင်ရဲ့သတင်းအချက်အလက်အတွက်)
Tagged on: grammar, Japanese Language, N4
By Miyawaki | 22/01/2016 | Study Japanese |
← Master Verb Forms “ONLY2hours”
[N3 Grammar] あいにく →